19 Jan 2017 . 3:21 PM
အိမ်ထောင်ရေးသုခပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့လည်း ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ပြီးတော့ “မြဟင်္သာ” ပြေးဝယ်မနေနဲ့ဦး။ လင်မယားတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရိုးမြေကျပေါင်းသင်းရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရေးမှာဗျ။ ဒီဆောင်းပါးအတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လင်မယားစုံတွဲတွေကို ချောင်းကြည့် အဲလေယောင်လို့ သေချာစစ်တမ်းကောက်ရပြီးမှ အချက်ကျကျရေးထားလို့ တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နာစေချင်ပါတယ်။
လက်ထပ်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်အိုး၊ ကိုယ့်အိမ်နဲ့ နေတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အိမ်ပိုင်မဝယ်နိုင်သေးရင်တောင် အိမ်ငှားနေလိုက်ပါ။ နှစ်ဖက်မိဘအိမ်မှာ အတူနေလိုက်ရင်တော့ သူ့ဆွေမျိုး၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးနဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်၊ ကြာလာရင် လင်မယားချင်း မတည့်တော့ဘူးနော်။ “နီးတကျက်ကျက် ဝေးတသက်သက်” စကားပုံလိုပဲ မိဘအိမ်မှာ အတူနေမယ်ဆိုရင် တကျက်ကျက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေမယ့်အတူ အိမ်ခွဲနေလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။
လင်ရယ်မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အိမ်သာတက်ရင်တောင် တံခါးမပိတ်တော့လောက်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံသင့်တယ်နော်။ ကိုယ်ကလည်း တချို့ကိစ္စလေးတွေ ထိန်ချန်ထားမယ်ဆိုရင် သူလည်း လျိုလာတော့မှာပဲ၊ ဒါက အပြန်အလှန်လေ။ အဲဒီတော့ မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ လင်မယားကြားမှာ ဘာကိုမှ လျိုဝှက်မထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
၃။ ဆက်သွယ်မှုကို နှလုံးသားဧရိယာဝန်းကျင်မှာ ထားပါ။
ရည်းစားဘဝတုန်းကလို “ချစ်တယ်” လို့ ခဏခဏမပြောဘူးဆိုရင်တောင် အိမ်ထောင်ကျသွားရင်တော့ အနည်းဆုံးတစ်နေ့တစ်ခါလောက်တော့ ပြောပေးပါ။ အသက်အရွယ်တွေ အိုမင်းသွားပါစေ၊ ရင်ခုန်သံတွေ လတ်ဆတ်နေအောင်လို့ “ချစ်တယ်” လို့ မကြာမကြာပြောပေးပါ။ ရင်ခုန်စေမယ့် အထိအတွေ့မျိုးနဲ့ နဖူးလေးကို နမ်းပေးတာမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ ပြဿနာကို အဖြေရှာပါ။
လင်မယားကြားမှာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာတိုင်း ဒေါသကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ ပြဿနာရဲ့ ရေသောက်မြစ်ကို အရင်ရှာပါ။ တဒင်္ဂဖြစ်လိုက်တဲ့ ဒေါသအတွက်နဲ့ နှစ်ရည်လများ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်ဗိမ္မာန်ကြီး မပြိုကွဲပါစေနဲ့။
၅။ မင်္ဂလာမှတ်တမ်းဗီဒီယိုခွေကို မကြာခဏကြည့်ပေးပါ။
လင်မယားချင်း စကားကတောက်ကဆဖြစ်လာမယ်ကြံတိုင်း၊ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လာတိုင်း မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုခွေကို ထုတ်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တွေ၊ ပျော်ရွှင်စရာအတိတ်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်နေရင်းနဲ့ကို ဒေါသတွေ ယူပစ်သလို ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ “ချစ်သောသူတိုင်း ညားကြလို့ ညားသောသူတိုင်းလည်း ရိုးမြေကျပေါင်းကြပါစေ”လို့ အခရာသူ၊ အခရာသားတွေက ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အိမျထောငျရေးသုခပွညျ့စုံမယျဆိုလို့လညျး ရှဉောဏျတျောစူးရောကျပွီးတော့ “မွဟင်ျသာ” ပွေးဝယျမနနေဲ့ဦး။ လငျမယားတှေ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ ရိုးမွကေပြေါငျးသငျးရမယျ့ နညျးလမျးတှေ ရေးမှာဗြ။ ဒီဆောငျးပါးအတှကျ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ လငျမယားစုံတှဲတှကေို ခြောငျးကွညျ့ အဲလယေောငျလို့ သခြောစဈတမျးကောကျရပွီးမှ အခကျြကကြရြေးထားလို့ တဈသဝမေတိမျးလိုကျနာစခေငျြပါတယျ။
လကျထပျပွီးတာနဲ့ ကိုယျ့အိုး၊ ကိုယျ့အိမျနဲ့ နတောက အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အိမျပိုငျမဝယျနိုငျသေးရငျတောငျ အိမျငှားနလေိုကျပါ။ နှဈဖကျမိဘအိမျမှာ အတူနလေိုကျရငျတော့ သူ့ဆှမြေိုး၊ ကိုယျ့ဆှမြေိုးနဲ့ မြိုးခဈြပုဂ်ဂိုလျတှဖွေဈလာမယျ၊ ကွာလာရငျ လငျမယားခငျြး မတညျ့တော့ဘူးနျော။ “နီးတကကျြကကျြ ဝေးတသကျသကျ” စကားပုံလိုပဲ မိဘအိမျမှာ အတူနမေယျဆိုရငျ တကကျြကကျြနဲ့ ရနျဖွဈနမေယျ့အတူ အိမျခှဲနလေိုကျတာက အကောငျးဆုံးပါ။
လငျရယျမယားရယျလို့ ဖွဈလာရငျ အိမျသာတကျရငျတောငျ တံခါးမပိတျတော့လောကျအောငျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆကျဆံသငျ့တယျနျော။ ကိုယျကလညျး တခြို့ကိစ်စလေးတှေ ထိနျခနျြထားမယျဆိုရငျ သူလညျး လြိုလာတော့မှာပဲ၊ ဒါက အပွနျအလှနျလေ။ အဲဒီတော့ မောငျတဈထမျးမယျတဈရှကျ လြှောကျလှမျးနတေဲ့ လငျမယားကွားမှာ ဘာကိုမှ လြိုဝှကျမထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။
၃။ ဆကျသှယျမှုကို နှလုံးသားဧရိယာဝနျးကငျြမှာ ထားပါ။
ရညျးစားဘဝတုနျးကလို “ခဈြတယျ” လို့ ခဏခဏမပွောဘူးဆိုရငျတောငျ အိမျထောငျကသြှားရငျတော့ အနညျးဆုံးတဈနတေ့ဈခါလောကျတော့ ပွောပေးပါ။ အသကျအရှယျတှေ အိုမငျးသှားပါစေ၊ ရငျခုနျသံတှေ လတျဆတျနအေောငျလို့ “ခဈြတယျ” လို့ မကွာမကွာပွောပေးပါ။ ရငျခုနျစမေယျ့ အထိအတှမြေို့းနဲ့ နဖူးလေးကို နမျးပေးတာမြိုး လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
၄။ ပွဿနာကို အဖွရှောပါ။
လငျမယားကွားမှာ ပွဿနာတဈခု ဖွဈလာတိုငျး ဒေါသကို ရှတေ့နျးမတငျဘဲ ပွဿနာရဲ့ ရသေောကျမွဈကို အရငျရှာပါ။ တဒင်ျဂဖွဈလိုကျတဲ့ ဒေါသအတှကျနဲ့ နှဈရညျလမြား တညျဆောကျထားတဲ့ အခဈြဗိမ်မာနျကွီး မပွိုကှဲပါစနေဲ့။
၅။ မင်ျဂလာမှတျတမျးဗီဒီယိုခှကေို မကွာခဏကွညျ့ပေးပါ။
လငျမယားခငျြး စကားကတောကျကဆဖွဈလာမယျကွံတိုငျး၊ စိတျဆိုးဒေါသထှကျလာတိုငျး မင်ျဂလာဆောငျတုနျးက ရိုကျထားတဲ့ ဗီဒီယိုခှကေို ထုတျကွညျ့တာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ကွညျနူးစရာပုံရိပျတှေ၊ ပြျောရှငျစရာအတိတျတှကေို ပွနျတှေးကွညျ့နရေငျးနဲ့ကို ဒေါသတှေ ယူပဈသလို ပြောကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ “ခဈြသောသူတိုငျး ညားကွလို့ ညားသောသူတိုငျးလညျး ရိုးမွကေပြေါငျးကွပါစေ”လို့ အခရာသူ၊ အခရာသားတှကေ ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။
မသိဘဲ မှားလုပ်မိနေတတ်တဲ့ မီးဖိုချောင်အလွဲများ (၁)
အလုပ်များတဲ့မိဘတွေ သားသမီးတွေနဲ့ ဝေးဝေး မသွားရလေအောင်
by Moethae Say .2months ago
၂၁ ရာစုရဲ့ ခေတ်သစ် ဖေဖေ မေမေကောင်းတွေ ဖြစ်စေဖို့
by Moethae Say . 12 months ago
ကိုယ်ဝန်အမြန်ရအောင် နည်းလမ်းတကျ ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ
by Editor . 1 year ago
by Moethae Say . 1 year ago
Super Sunday မှာ မိသားစုနဲ့ ဘယ်လိုအချိန်ဖြုန်းကြမလဲ